प्रहरी घेराभित्रै डा. केसीको अनशन | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← अर्जेन्टिनाका मिडफिल्डर मास्चरानोद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास
तत्कालीन एमालेबाट विजयी अध्यक्षलाई नेकपाको दुर्व्यवहार, दलियो कालो मोसो →
प्रहरी घेराभित्रै डा. केसीको अनशन
Posted on 01/07/2018 by कुवेतनेपाल एडमिन | टिप्पणी छोड्नुहोस्
जुम्ला : डा. गोविन्द केसीले प्रहरी घेराभित्रै आमरण अनशन थालेका छन्। पुरानै स्वरूपमा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गर्न माग गर्दै उनले १५औं अनशन सुरु गरेका हुन्। गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले केसीले अनशन थाल्ने भनिएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसहित मुख्य तीन क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपछि डा. केसीका समर्थकले शुक्रबार दिनभर विरोध प्रर्दशन गर्दा जिल्ला सदरमुकाम तनावग्रस्त बनेको थियो।
सरकारले अवरोध गरिरहेको छ। तर म अनशन तोड्दिनँ।-डा. गोविन्द केसी
माग पूरा नभएसम्म कसैले पनि आफ्नो अनशन रोक्न नसक्ने उनको भनाइ छ। ‘सरकारले अनशनमाथि अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। म त्यसको खतरा मोल्न तयार छु’, उनले भने, ‘तर अनशन तोड्दिनँ। नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि राज्यले खेलवाड गर्न मिल्दैन। म नागरिक र चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि राज्यलाई दबाब दिन अनशन बसेको हुँ। तर संविधानमै लेखिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध प्रशासनले प्रतिबन्ध लगाएर त्यसको नतिजा गलत निम्त्याउन खोज्दै छ।’(अन्नपूर्ण )